Sadaasaa 9, 2007 (ABO) Aadaa Faashistummaa fi tooftaan goolessitummaa sirna mootummaa bicu Mallas Zenaawii-TPLF/EPRDF, ammaas daangaa seera aduunyaa tarkaanfatuun, Oromoota galaafate kun, nagaa jaalattoota hundaan kan abaaramuu qabu dha.
Torbaan kana, naannoo magaalaa Nairobi-tti, baqattootni Oromoo Indalkaachow Tashoomaa fi Indashaw Tashoomaa, gartuu tarkaanfii mootummaa faashistii Wayyaneen ajjeeffamuun barame jira. Tarkaanfuma dabeesummaa kanaan, Oromootni Girmaa Tashoomaa fi Daadhii Raddaa akkasuma dhaloota Kibbaa kan ta’an, Mallas Kanbaataa rasaasaan madeeffamani, Hospitaala biyyoolessaa Kenyaattaa jedhamuutti tajaajilamaa akka jiran hubatame jira. Mallas Kambaataa madaadhuma sanaan mana yaalaatti kan lubbuun irraa baate tahuunis gabaafame jira. Tarkaanfii sirna Mallas kanaan namni waardiyaa mooraa jireenna baqattoota kanaa ture, kan maqaan adda hin bahin tokkos akka battalumaatti ajjeefame iyyannaan waldaa baqqattoota Oromoo Kenya beeksisee jira.
Torbaanota lamaan dabran qofa keessatti harkii caalaan Oromoota kan ta’an baqattootni kudhani fi journalistootni afur gartuu tarkaanfi mootummaa Wayyaneen Nairobii fi naannooleetti ajjeefamuunis bira gahamee jira. Kenyatti baqattoota Oromoo faana deemani galaafatuu fi Oromoota lammii Kenyaa ta’an maqaa mararfannoo qabsoo Oromoo-ABOn hoogganamuun qabatani kanneen gadaa Wayyanee kana keessattu ajjeefaman, walumaa gala dhibbotaatti herregaman.
ABO akkuma kanneen kanaan duratti, tarkaanfi bineensummaa sirnii duubaatti hafaan ilmaan Tigray, baqqattoota Oromoo fi kaanneen kaani illee irratti raawwate kana jechoota ol-aanaan balaaleffate jira.
Tarkaanfiin dabeessummaa namoota nagaa irratti akeekkatuun sirna gad-aanaa Wayyaaneef aadaa dha. Gochaaleen faashistummaa daangaa biyyoota olla cehani ummata nagaa irraan sirna Mallasiin geessifamu, amala bineesummaa nagaa jaalattootni hundi balaaleffatuu fi abaaruu qaban ta’u ABO ni addeessa.
Keessaattuu Kimmishini mirga dhala namaa-Kenya, UNHCR-Kenya fi jaarmayootni mirgoota namoomaaf dhaabbatan kanneen sadarkaa adduunyaa, goolessitumama mootummaan Wayyaanee daangaa tarkaanfachiisee jiru kana, dura dhaabbatuuf dirqama dura qabu. Kanuma waliin mootummaa fi biyyii keenyaa battala qalma dhala Oromootti jijjiiram isaa hunduu hubate, mootumma nama nyaataa Sirna Wayyaneef ergamuu Kenya kana akka dhaabsisan, ABO ar’as waamicha isaa haaromsa.
Furmaatni gartuu Faashistii Wayyaanee fi aadaa goolessitumma gartuu Mallas, qabsoo bilisummaa finiinsuun, sirna hattoota kannneni kufisuu qofa akka ta’e, ar’as lubbuun Oromoota galaafatamani kun hunda yadachiise jira.